AMAJJII 16, 2016 DHAAMSA UMMATA OROMOO MANNEEN HIDHAA WAYYAANEE IRRAA NU QAQQABE – gamtaa site
AMAJJII 16, 2016 DHAAMSA UMMATA OROMOO MANNEEN HIDHAA WAYYAANEE IRRAA NU QAQQABE
“Hunda kan dursu nagaa waaqaati! Alaa fi manni, sa’aa fi namni, guddaa fi xiqqaan hundi maal keessa jirtu? Obboloota keenya waraana wayyaaneen dhiigni isaanii dhangala’ee fi lubbuun darban biyyoon isinitti haa salphattu, gumaa keessan waaqni yaa haru; kanneen waraana wayyaaneen madooftanii yaalamaa jirtaniif immoo waaqni haa dhaabbatu!
Nuti ammaaf akka nama ijji badee taane, gurraan garuu xiqqoos taatu waan itti jirtan ni dhageenya. Kanarraan kan hafe nagaa qabna akka hin jenneef yaaddoo keessan biratti jireenya mana hidhaa Wayyaanee kuun seentanii beektu, kaan immoo ni dhageessu! Dhaamsi keenya gabaabumatti kan armaan gadii fakkaata.
‘Waraabessa Roobii darbe sareen Kamisa dutte’ akka jedhamu sana oduu xiqqoon dhimma ‘Master killer’ gurra nu buute. Caffeen Oromiyaa ‘Master killer’ dhaabneerra jechuun labsan jedhama. Kuni duraan bara 2014 keessa yommuu namoota 78 balleessanii fi kanneen kumaatamaan lakkaa’aman madoo taasisanii fi mana hidhaatti dararan sana darbe. Sochiin ummata Oromoo har’a jiru sadarkaa ‘master killer’ haquu mitii OPDO aangoo irraa haqee sadarkaa ilmaan TPLF Oromiyaarraa haquu qaqqabaa jira. Mootummaan Wayyaanee humna qabu kamiinuu sochii Oromoo dhaabuuf yaalee jira. Waraana labsuudhaa olitti wanti humni guddaan hin jiru. Mootummaan Wayyaanee immoo ifaan ifatti ummata Oromoo mirga isaa gaafate shororkeessaa jechuun waraana irratti labsee jira. Humna waraanaa oliimmoo hin qaban. Waraanni isaaniis kaan dhiiga dhangalaasee ajjeeseera, kuun lafee caccabsuun qaama hir’uu fi kanneen hafan immoo mana hidhaatti darbataniiru. Gochaan gara jabinaa kunis sochii ummataa dhaabuu hin dandeenye. Mootummaan Wayyaanee kufee sirni ofiin of bulchuu ummata Oromoo waan dhiyaateef malee ‘master killer’ jaalatanii haa dhaabbatu hin jenne. Kanaan dura yommuu Teessoon Mootummaa Naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti yeroo geeddaran, lubbuun meeqa darbee, namni meeqa hanga har’aa hidhaa keessaa rakkina argaa fi kanneen biroo baqattoota, barattoonnis barnoota malee hafuun ni yaadatama. 2014 Karoora kana nuuf fidan. Waan yeroo sanaas ni beekna. Baranammoo bifa kanaan dhufan. ‘Master killer’ barana yoo dhaaban egeretti karoora biraa nuuf qopheessu. Wanta kanaa oliitu ummata keenya eeggata. Nuti yeroo har’aatti mana hidhaa keessatti darara addunyaarraa hin jirre argaa jirra. Mootummaan sobee fakkeessuun sochii ummataa tasgabbeessee hiriyoota keenya haftanis nutti isin dabala. Hadhaa argaa jirru, kana arguu dandeessu. Obbolaan keenya wareegamanis dhibbaan lakkaa’amu. Isaan har’a hanguma keenya kanallee dhaammachuu hin danda’an. Garuu, hekeraan isaanii boqonnaa nama dhorka. Kanaaf, murtoon Oromoo tokko duwwaadha. Harka walqabatee gaaffii abbaa biyyummaa itti fufuu. Sana hin taane taanaan hunduu dhufee waliin mana hidhaa teenya. Kaan immoo akkuma hiriyoota keenyaa wareegamu. Oromoon biyya ambaa jirus osoo Oromiyaa yaaduu yaaddootti hafuu mala. Diinatti funyoo keessaniirtu, keessaa baasuu duwwaatu hafa. Xumura itti gochuus qabdu!
Nuti har’a gurraan xiqqoo dhageenya malee waan addunyaan keessa jirtu hin beeknu. Halkanii fi guyyaa gogaan keenya dhiiga roobaa jira. Kanneen humnaa ol miidhamaniif immoo wal’aansatu godhama osoo hin taane qoricha seeraan alaa waraannamuun ajjeefamaa jiru. Kan du’eef boowuu fi awwaallachuunis dhorkaa taheera.
Walumaagalatti 1.Daa’imti waggaa saddeetii gabrummaatti guddachuurra mirga ofii falmachuun rasaasaan wareegamuu
2.Daa’imti waggaa torbaa boombiin haleellamuu
3.Dubartiin ulfa ji’a torbaa waliin rasaasaan ajjeefamuu
4.Jaarsi waggaa saddeettamaa umrii isaa guutuu gabrummaa nuffuun waraana mootummaan wareegamuu fi kkf wanti caalu waan hin jirreef diinaaf hin araaramnu! Sochiin ummata keenyaa ‘master killer’ haquurra ce’ee aangoo OPDO haqee ilmaan TPLF Oromiyaarraa haquurra gahee waan jiruuf akka duuba hin deebine dhaamsa keenya gabaabduu kana wal nuuf qaqqabsiisaa!
Injifannoon Ummata Oromootiif!!”
Jaarmiyaa Hidhamtoota Oromoo Irraa!
Abbaan Biyyaa Oromoodha!
← Addis Ababa master plan is not scrapped to begin with
Poking fun at African leaders on social media →